Manzi zokukhanyisa lwemidlalo
Lokulinganisa manzi ne sizinze
Lokulinganisa manzi ne LED tube
Integrated LED Lokulinganisa okungangenwa
Body kwahlukaniswa LED Lokulinganisa okungangenwa
Body kwahlukaniswa LED Lokulinganisa okungangenwa With woluvo
Ingontsi Louver Lokulinganisa ne LED Tube
Umphezulu Louver Lokulinganisa ne LED Tube
Ingontsi LED Louver Lokulinganisa
Avala kufaneleka ne LED Tube
LED avala Lokulinganisa
lokulinganisa zingabi nalo
LED zingabi nalo Lokulinganisa
Ingontsi Panel LED kunye Back Light
Umphezulu LED Panel nge Back Light
ayamiselwa ngo-2004 kwaye ibekwe Longshan Town, Cixi City, Zhejiang, China, kufuphi Ningbo port. Lufikelela kuyo indawo ka-30,000 m 2 , iqeshe abasebenzi 350. Thina professional umenzi izibane isixhobo egxininisa kuphando, uphuhliso kunye ezintsha lweemveliso zokukhanyisa ezahlukeneyo, ubugcisa kunye nezisombululo, kwaye nee-amandla oluhlangeneyo imveliso yoyilo & nophuhliso, izahlulo processing, ibandla imveliso njl
Ukuthembela uncedo ezifanelekileyo zeqela mveliso, yaye ingqiqo ulawulo olugqwesileyo kunye indlela supply chain, a phambili kakuhle iindleko wadalelwa shishino.
Ebambelele kwizinga eliphezulu nexabiso eliphantsi, Sibonelela ne uthotho olupheleleyo imveliso ukukhanyisa kunye best ratio yokusebenza ixabiso, ezifana izibane ubunjineli iimveliso ukukhanyisa ukusetyenziswa emkhosini. Sinako ukuhlangabezana neemfuno iphezulu kubathengi, ukusombulula iingxaki zobugcisa ukudala ixabiso elikhethekileyo ukuba abe liqabane kakhulu abathengi ezininzi.
Abaxhamla inkxaso egqibeleleyo yobugcisa, umgangatho weemveliso yayo sele sivunyiwe yi ehlabathini. Siye wadlula ISO9001: Certification Quality Management System 2008. Iimveliso kuhamba izitifiketi ka CE (LVD / EMC), GS, ul, CETL, SAA kunye njl
Okwangoku, ishishini lethu liye lwavakala kulo lonke China kunye neemarike eziphambili ehlabathini, iimveliso zethu zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-30 kunye nemimandla, ezifana eYurophu, USA ne-mpuma Asia, ndize ndoyise incoma ezivela kubasebenzisi basekhaya angaphandle yi olukumgangatho ophezulu kunye ixabiso kukhuphiswano.
Njengoko iqabane lakho uthembeke, siya ngqo amadinga, qhubeka ukuphucula, yaye usoloko uthabathe nokunika iimveliso kunye nokusebenza kakuhle inkonzo elihle "njengoko woxanduva lwethu.
Idilesi: Qindu Road, East-Cixi, Zone Industrial, CiXi City, Zhejiang
Power ngu Globalso.com